Kulanka Offenburg Waa “Macalin Xagaa Injirta Lagama Qabto” – Rasaasa News
Kulanka Offenburg Waa “Macalin Xagaa Injirta Lagama Qabto”
Apr 27, 2011 2011 [ras] - Saddex sarkaal oo ka socta dawlada Ethiopia iyo faladh ka mid ah kooxda Jwxo-shiil, April 27, Kulanka Offenburg Waa "Macalin Xagaa Injirta Lagama Qabto", Offenburg, oo in yar u jirta magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka oo shalay, oo kulan qarsoodi ah uga socday magaalada Offenburg
Offenburg, April 27, 2011 [ras] – Saddex sarkaal oo ka socta dawlada Ethiopia iyo faladh ka mid ah kooxda Jwxo-shiil, oo kulan qarsoodi ah uga socday magaalada Offenburg, oo in yar u jirta magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka oo shalay galabtii dhamaaday.
Wadahadalka u dhaxeeya dawlada Ethiopia iyo faladhka kooxda Jwxo-shiil, waxaa ka shaqeeyey, dad ka mid ah Jaaliyada Jwxo-shiil, oo ay qaraabo dhaw yihiin madaxda dawlada degaanka Somalida Ethiopia.
Wadahadalka ayaa ku dhamaaday isfaham, waxaana lagu balamay kulan labaad oo ka dhici doonaa dalka Keny. Waxayna labada dhinac ku heshiiyeen in saxaafada laga qariyo wadaxaajoodka u socda, inta laga gaadhayo wajiga labaad.
Kooxda Jwxo-shiil, oo aad u qaybsan ayaa cosatay in wakhti la siiyo, si ay wax u fahamsiiso xubnaheeda diidan wada xaajoodka nabada ee u dhaxeeya dawlada Ethiopia iyo kooxda Jwxo-shiil.
Dawlada Ethiopia, ayaa iyana dhankeeda codsatay in uusan Jwxo-shiil, miiska lagu heshiinayo uusan ku imanin gudoomiyaha Kooxda.
Saraakiil iyo ganacsato Somalida Kenya ah, oo lug weyn ku leh kooxda Jwxo-shiil, ayaa ku adkaysanaya in ay asturaan Jwxo-shiil, kuwaas oo marti loogu noqon doonaa dalka Keyna.
Kooxda Jwxo-shiil, ayey meel waliba ka soo xidhantay, wax aan heshiis nabadeed oo ay Ethiopia la gasho ahayna meherad ku yeelan mayso. Waxaana arintaas daliil u ah sida uu wadahadalku ku bilowday iyo cida bilowday [kooxda Jwxo-shiil, ayuu xaalkeedu yahay “macalin xagaa injirta lagama qabto.”
Culays badan ayaa haysta Jwxo-shiil, sidii uu miis u wada keeni lahaa xubnaha kooxdiisa oo ku qaybsan heshiis nabadeed oo lala galo Ethiopia. Cid kasta oo ka maqnaata heshiis uu Jwxo-shiil, Ethiopia la galo waxay noqon doontaa wax aan jirin.
Hal ku dhagii Dr. Dolal ee Jwxo, oo ahaa; Midnimo, Mintid, Isku tashi Guul iyo Gobonimo.
Hal ku Dhaga Jwxo-shiil, oo ahaa; Kala-tag, Fulaynimo, Kala-tashi, Guul-daro iyo Gumaysi.
War Jiraaba Cakawgguu Iman!
Khilaaf iyo Masayr, Minweyn iyo Biya-dhanaan